@Broadcast ဆုရ Beat Awards! 2014 #NABShow Edition ကို | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » @Broadcast ဆုပေးပွဲ Winner Beat! 2014 #NABShow Edition ကို
@Broadcast ဆုပေးပွဲ Winner Beat! 2014 #NABShow Edition ကို
ကောင်းပြီ, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးတို့သည် coveted အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲအဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2014 မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ် NAB ပြရန်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိ Origins, တည်ဆဲနည်းပညာအပေါ်တိုးတက်မှု၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေ, ပါဝင်သည်။
အဲဒီမှာသုံး (3) "တစ်နှစ်တာ၏ကုန်ပစ္စည်း" အဓိကထုတ်လွှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်တဦးတည်းအသီးအသီး "အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး," "အကြောင်းအရာ Delivery," နှင့် "အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းအုပ်စုများ Beat တီထွင်ဖန်တီး, ရှိသမျှသည်အခြားသောအမျိုးအစားများ (မူရင်း, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများတွင်" ။ ဖြစ်ကြပြီး အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု), သုံးဆုရရှိသူတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်။
PRODUCT မှ: လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
WINNER: တစ်နှစ်တာ၏ကုန်ပစ္စည်း, အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး
အဖြစ်ဝေးမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုသွားအဖြစ်, Primestream ရဲ့လမ်းဆုံလမ်းခွကဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်! သငျသညျအသုံးပြုသူများမီဒီယာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်ထိန်းချုပ်ပြင်ဆင်ရန် metadata ကိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကုန်းပတ်, ထည့်သွင်းသည့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အကျိုးရလဒ်များစောင့်ကြည့်အဖြစ် system ကိုအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ မသာပါကသယံဇာတအရင်းအမြစ်များသည် dynamically ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခံရဖို့ခွင့်ပြုထားခြင်း, မီတာဒေတာကိုမောင်းနှင်လုပ်ငန်းအသွားအလာကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လိုအပ်နေရာတိုင်းမှာအသုံးပြုသူရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာအကြောင်းအရာကိုထည့်လေ့မရှိတဲ့အစွမ်းထက် automated စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပေးပါသည်။ အံ့သြဖွယ်!
Primestream ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု Automation software ကိုဖြေရှင်းချက်ကနေတဆင့်, ဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲခြင်း, လေထုကျော်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့ထုတ်လွှင့်, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ enable ဂြိုဟ်တုနှင့်ထိုကဲ့သို့သော PC များ, မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် tablet များအဖြစ်ဒုတိယဖန်သားပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ၏ Primestream ရဲ့လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်လိုင်းတစ်ခုတည်း, ဘက်ပေါင်းစုံ software ကို suite ကိုအတွက်မျိုးစုံ module တွေပေါင်းစပ်သည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အကွာအဝေးအခမဲ့လူသားမြားသညျသူတို့အကောင်းဆုံးဖန်တီးကြဘူးဘာလုပ်မှအဆင့်မြင့် automated Workflows အကောင်အထည်ဖော်ရန်မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်အာဏာကြောင့်အဆင့်မြင့် metadata ကိုရှာဖွေရေးနှင့် scripting နည်းပါဝင်သည်။
PRODUCT မှ: ပွောငျးလဲ
WINNER: တစ်နှစ်တာ၏ကုန်ပစ္စည်း, အကြောင်းအရာ Delivery
MOV များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပြန်ဖွင်နှင့်တသားတလျှောက်လွှာအတွက်မီဒီယာ, play စစ်ဆေးခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောဖို့လိုတယ်, MP4, MKV, MXF, GXF, MPS, MTS နှင့်အခြားသူများ? switch ကလုပျနိုငျသော multiformat ကစားသမားပါ! , ကိုချုံ့စကေးနှင့်သီးနှံ, ထိုအချိုးကိုပြောင်း, အသံဖိုင်သီချင်းများ, ပြင်ဆင်ရန်ပီတာဝနျမြားသို့မဟုတ်ပင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ codec နှင့် format ကိုပြန်စီရန်လိုအပ်ပါသလား? Check-ထဲက embedded ဗီဒီယိုက။ switch မကြာမီ NAB ပြီးနောက်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Telestream စားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖြတ်ပြီးကဗီဒီယိုအသွင်ပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းကမ္ဘာ့အဆင့်မီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို tools များနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီအတော်များများကအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းအသုံးပြုသူကြီးထွားလာသောအရေအတွက်အပေါ်အားကိုး Telestream , စစ်ဆင်ရေးချောမွေ့ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်တွေရောက်ရှိဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာကနေပိုပြီးဝင်ငွေကို generate မှထုတ်ကုန်။ Telestream ထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်စားသုံးမိအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း, span; အသက်ရှင် On-demand encoding ကနှင့် transcoding; စာတန်းထိုး; ပလေးအောက်, ပို့ဆောင်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်; အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာများအလိုအလျောက်နှင့် orchestration အဖြစ်။ Telestream ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်တည်ရှိနေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.telestream.net.
PRODUCT မှ: Blackmagic ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ 4K
WINNER: တစ်နှစ်တာ၏ကုန်ပစ္စည်း, အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း
Blackmagic ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ 4K ကမ္ဘာ့အများဆုံးခရီးဆောင် 4K ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာဖြစ်ဟန်! ကြီးမားတဲ့စူပါ 35 အရွယ်အစား sensor နဲ့မှန်ဘီလူး mount တိကျစွာ EF နဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့ professional ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှပ်နှင့်အတူကကြော်ငြာ, အားကစား, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, အင်တာဗျူးနှင့်အင်္ဂါရပ်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးဘို့ပြီးပြည့်စုံသောပါပဲ။ နောက်ဆုံးပေါ် High-end ရုပ်မြင်သံကြားသောကြောင့် နှင့်ဗီဒီယိုပရိုဂျက်ထောက်ခံမှု က Ultra HD 1080 ၏လေးဆ resolution နဲ့ (format တစ်ခု HD), ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်အားကြီးအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ် high resolution ကတော့ဂီတဗီဒီယိုများ, က Episode ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာနှင့်အရာအားလုံးထက်ရိုက်ချက်အတူသင်တို့သည်မည်! အရည်အသွေးအဘို့အအင်ဂျင်နီယာတိ, အတစ်ခုတည်း 6G-SDI output ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကမ်းလှမ်း က Ultra HD ထုတ်လုပ်မှုနေထိုင်ကြသည်။ အံ့မခန်း!
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမှဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်အလွန်လိုအပ်မယ့်ဘယ်မှာအာရုံစိုက်; Blackmagic အများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောအချို့ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့မယှဉ်နိုင်တဲ့ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကျော်ကြားကမ္ဘာ့ဖလား, Blackmagic Blackmagic software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအပျေါမှာတညျဆောကျအမှန်တကယ်တတ်နိုင် High-end အရည်အသွေးကိုတည်းဖြတ်ရေးစက်မျှော်မှန်း။ Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကိုတည်ထောင်သူ Post-ထုတ်လုပ်မှုတည်းဖြတ်ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးရှည်လျားသောသမိုင်းရှိခဲ့တယ်။ High-end Telecine, ရုပ်ရှင်နဲ့ post အတွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ, စုံလင်များအတွက်အမှန်တကယ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူနေရသည်, Blackmagic အစဉ်အမြဲစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲပစ်ရန်ထွက်ထားကြ၏။
PRODUCT မှ: တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးရှာရန် v1.5 တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး-အခြေပြုပိုင်ဆိုင်မှုရှာရန်
တစ်ခုခုပြောဆိုဘယ်မှာ? သာစက္ကန့်၌, Nexidia ဆွေးနွေးပွဲရှာရန်ဆိုပြောပြီစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုရှာပြီးကစားရန်မီဒီယာ၏နာရီအတွင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတဆင့် combs ။ သငျသညျအစဉ်အလာ metadata ကိုသို့မဟုတ်စာတန်းရှာဖွေရေးကိုရှာဖွေဘယ်တော့မှနိုင် segments များနေရာချထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဒုတိယအောက်မှာမီဒီယာ၏နာရီအတွင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်, ဘာသာစကားများနှင့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများများစွာတစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံ volumes ကို၏ရှာဖွေမှုများနှင့်မျိုးစုံစာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူထောက်ခံကြသည်သာ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်အသံလွှင့် Beat တရားသူကြီးတွေသဘောကျပေမယ့်ကစိတ်လှုပ်ရှားမသာခဲ့ကြ!
Nexidia အသံနှင့်ဗီဒီယိုရှာဖွေရေးများအတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြည့်စုံအကွာအဝေးကိုကယ်နှုတ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှစ်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ Nexidia သူတို့ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအတွက်ယခုရှာဖွေသည့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဆက်အသွယ်စင်တာများ, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများ, အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီများအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုနည်းပညာနှင့်ဖြန့်ကျက်အရင်းမြစ်များပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်, Nexidia, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာပြုလုပ်ရှာဖွေအောင်နှင့်တတ်နိုင်သမျှယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်မတိုင်မီဘယ်တော့မှအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်တန်ဖိုးကိုအောင်မြင်ရန်ရန်သင့်အားဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညအသံနှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ၏ကြီးမားသောပမာဏအတွင်းရှိထိရသေးသောတန်ဖိုးကိုသော့ဖွင့်တဲ့ပလက်ဖောင်းကိုအပ်လိုက်ပါတယ် နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အခွင့်အလမ်းများ။
PRODUCT မှ: WinPlus အဝေးမှ
LOCATION အညွန့်အပေါ်ဝေးလံသောအခွက်တဆယ်ဘို့ကို up-to-date ဖြစ်အောင် script များရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေပါသလား
အဘယ်သူမျှမကပိုစိုးရိမ်ပူပန် - WinPlus အဝေးမှ, လယ်ပြင်၌အသုံးပြုသူများကို up-to-The-ယခုအချိန်တွင် script များကယ်တင်တတ်၏ ကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆို။ အပြည့်အဝကင်မရာယူနစ်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်နှင့်အတူချက်ချင်းစနစ်များကိုမရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်လက်တွေ့ကျတဲ့မဟုတ်ရှိရာနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ကိုက်ညီ, WinPlus အဝေးမှဘယ်နေရာမှာမဆိုသတင်းထိုကဲ့သို့သောအားကစားဖြစ်ရပ်အဖြစ်အမြဲတစေ updated လျက်ရှိသည်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမျှမကပဲပြင်ပမှာအသုံးပွုရနျအတှကျသငျ့လျြောသော - စနစ်အပြည့်အဝဆော့ဖျဝဲစနစ်ကုန်ကျ-ထိရောက်သောအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူငယ်များသတင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ WinPlus အဝေးမှတရားဝင်ဧပြီလ NAB မှာဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်နှင့် Autoscript ထံမှရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် picoPrompt Apple ရဲ့ App Store ကိုကနေတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Autoscript ကမ္ဘာအနှံ့ထုတ်လွှင့်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် teleprompting ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ခြင်း, ချက်ချင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်အတွက်ဌာနချုပ်ကိုအတူ 1984 အတွက်ဗြိတိန်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Autoscript ဒီဇိုင်းများနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဆန်းသစ်ဟာ့ဒ်ဝဲ, PC ကိုကတ်များနှင့် software တည်ဆောက်။ ဒီတစ်ဦးကသုဒ္ဓဥပမာ Autoscript ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသည် EPIC (သတင်းအချက်အလက်စင်တာကိုချက်ချင်း Enhanced), တစ် All-In-One prompter display နှင့်စှာစတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများရိုးရှင်းစွာပြုလုပ် On-လေထုအခွက်တဆယ်မော်နီတာဖြစ်ပါတယ်, ပါဝါစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူတည်နေရာအချက်ပြနိုင်ပါတယ်။ Autoscript ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် Vitec Group မှ။
Vitec Videocom , အများဆုံးလေးစားဖွယ်အချို့အတူတကွဆောင်တတ်၏အများဆုံးဆန်းသစ်ဆုံးနဲ့ဆည်းကပ်-ပြီးနောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမှတ်တံဆိပ်: Anton / Bauer က Autoscript, Litepanels, OConnor, ဓာတ်ဆီ, Sachtler, Vinten နှင့် Vinten Radamec ။ အဲဒီစျေးကွက်-ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နဲ့လိုလားသူဗီဒီယိုအားထုတ်ကုန်အားတက်စရာ Multi-အမှတ်တံဆိပ် system ကိုအရောင်းနှင့်ဖောက်သည်များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလုပ်ဆောင်သောလမ်း simplifying တစ်ခုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
Vitec Videocom အဆိုပါအတွင်းက Operating ဌာနခွဲဖြစ်ပါသည် Vitec Group ကယင်းထုတ်လွှင့်အတွက်ဖောက်သည််ထမ်းဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး, ဓာတ်ပုံပြပွဲနှင့်စစ်ရေးအာကာသနှင့်အစိုးရစျေးကွက်။ Vitec ၎င်း၏ဖောက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအပေါ်မှီခိုအားထားနေခိုင်မာတဲ့, ကောင်းစွာမသိ, ပရီမီယံအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အခြေခံသည်။
PRODUCT မှ: xMac Pro ကို Server ကို
အဆိုပါ 10824 မှာ Booth SL2014 NAB ပြရန် တဲအတွက် SL10824 ဟာကြည့်ရှုရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 2-to-PCI Express®အသစ်က Mac အတွက်Pro®ကွန်ပျူတာတွေအတွက် (PCIe®) တိုးချဲ့ရေးစနစ်နှင့် 4U rackmount ဝင်း¢xMacâ "¢ Pro ကိုဆာဗာThunderboltâ" ။ နက်ရှိုင်းတဲ့ 4U ထိန်သိမ်းအာကာသ (7 လက်မ) နှင့်ရုံ 16 လက်မ၎င်းပြင်, ဒီစနစ်ကလူကြိုက်များတဲ့မိုဘိုင်းထိန်သိမ်း, လှည်းများနှင့်ထိန်သိမ်းအမှုပေါင်း၏ကျယ်ပြန့များတွင်အဖြစ်ဆာဗာခန်း၌အသုံးပြုရန်စုံလင်သည်။ အေးမြနီးပါးတိတ်ဆိတ်နှစ်ခုသိသိသာသာတိတ်ဆိတ်, အပူချိန်-controlled, variable ကိုမြန်နှုန်းပရိတ်သတ်များဆူညံသံ-အထိခိုက်မခံ enviroments မှာအေးမြယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန် Airflow စီမံခန့်ခွဲ။ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မယ့်အနာဂတ်နေ့စွဲမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ ဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ xMac Pro ကိုဆာဗာ, ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Sonnet အားဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Sonnet Technologies က Inc ကနည်းပညာPCIe®တိုးချဲ့ထုတ်ကုန် interface ကိုကတ်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအတွက်အသုံးပြုသူများအ, ဗီဒီယို, နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မီဒီယာစာဖတ်သူများ¢ "Thunderboltâ, သိုလှောင်မှုစနစ်များကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Sonnet ရဲ့ Thunderbolt တိုးချဲ့ထုတ်ကုန်လိုလားသူအသံ I / O နှင့် DSP ကတ်များလိုလားသူဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့် transcoding ကတ်များ, အင်တာဖေ့စကတ်များနှင့်အသေးစားနှင့်အတူအခြား high-performance ကို PCIe ကတ်များခရီးဆောင်နှင့် All-In-One ကွန်ပျူတာများအသုံးပြုခြင်းကို enable ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်လိုင်းက high-performance ကို, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခရီးဆောင်, Desktop များနှင့် rackmount RAID သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးပါရှိပါတယ်။ Sonnet Mac®, Windows®နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်း-စံကွန်ပျူတာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းမြောက်မြားစွာဆန်းသစ်နှင့်ဆုရထုတ်ကုန်စျေးကွက်မှရှေ့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီထက်ပို 25 နှစ်ပေါင်း။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.sonnettech.com.
PRODUCT မှ: LYNXdr - မိုးတိမ်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
စီးပွားရေးလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းချိန်အန္တရာယ်ရှိသည်နှင့်ကြောင်းကိုသိတယ် လုံးဝ data တွေကိုဆုံးရှုံးဘက်မှာဆိုးရွားပါ! ကျေးဇူးတင်စရာ, အင်တာနက်ကိုအစဉ်အမြဲအကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စားသုံးသည်ကဘေးဥပဒ်ကိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များပြောင်းလဲသွားမယ့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားပြီမသာ။ ဝင်ရောက် LYNXdr - တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိက-မိုဃ်းတိမ်ကိုဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူတွေနဲ့ဖိုင်လုံခြုံမှုနှင့်သုညကျချိန်သေချာကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်စနစ်ကကျင်းပခဲ့သည်။ တစ်ဦးကလုံခြုံ off-site backup လုပ်နိုင်စွမ်း, LYNXdr ingests နှင့်အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ဒေသဆိုင်ရာမိုဃ်းတိမ်သည်တည်နေရာမှအီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ် data ကိုတိပ်ခွေကနေ content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ကို virtual စက်တွေအတွက် off-site ကိုဒေတာ backup လုပ်ထား On-ရဝုဏ်ဆာဗာများနှင့်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်အများကြီးလျော့နည်းအကုန်အကျဖြစ်ပါသည် - သင်သာသင်ကအသုံးပြုတဲ့အခါသင်အသုံးပြုအရာကိုပေးဆောင်။ LYNXdr: ဥစ္စာများကဲ့သို့မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်, မြင့်မားအဖိုးတန်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်။
တပ်ဦးဆင်ဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ်, ပြောင်းရွှေ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာမှငွေဝင်ဘို့အဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ site ပေါ်တွင်နှင့်မိုဃ်းတိမ်၌ operating, ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်-built software ကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အရွယ်မှာမီဒီယာ Workflows ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုန်ထမ်း။ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အစွမ်းကုန်လုံခြုံရေးသေချာစဉ်တပ်ဆင်ဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြင့်ကယ်လွှတ်ဖြေရှင်းချက်သင့်လျော်စွာမီဒီယာဖိုင်တွေနဲ့ Workflows ကြီးမားပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့စီမံခန့်ခွဲ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် fpdigital.com.
PRODUCT မှ: NAB သ. ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်!
PRODUCT မှ: အကြွင်းမဲ့အာဏာ Positioning System (APS)
ဒီနည်းကိုထုတ်ကုန်အကြွင်းမဲ့အာဏာအအေးဆုံးပဲ! Vinten Radamec ရဲ့ Absolute Positioning System (APS) တစ်ခုလုံးကိုစတူဒီယိုကြမ်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတိကျသော Pre-set ကိုရိုက်ချက်များကယ်လွှတ်ခြင်းငှါမဆို Vinten Radamec Fusion အောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ 360 °သို့မဟုတ်ကြီးမားသောနေရာများ, သုညစုဆောင်းအမှားနှင့်အတူစတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းအောက်ခံအနေအထားများ Real-time အကြွင်းမဲ့အာဏာတိုင်းတာခြင်း, ဤစက်ရုပ် device ကိုကူညီဘို့အလျှပ်တပြက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ, မည်သည့်စတူဒီယို layout ကိုအတွင်းလျောက်ပတ်။ တိကျမှန်ကန် Pre-set ကိုရိုက်ချက်များနှင့်အတူကအလိုအလျောက် application များအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အစဉ်အလာအထပ်ပစ်မှတ် positional referencing နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းလည်ပတ် overhead ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ စက်ရုပ်ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကင်မရာစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောရိုက်ချက်များပေးတပိုင်တနိုင်သို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများတွင်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ စက်ရုပ်ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကင်မရာစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောရိုက်ချက်များပေးတပိုင်တနိုင်သို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများတွင်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးအော်ပရေတာမဟုတ်ရင်ဘာသာရပ်နှောက်ယှက်မယ်လို့ဘယ်မှာမြင့်မားတဲ့လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်မြင်ကွင်းများ၏ဒေသများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမသာပါကတစ်ဦးချင်းစီပြသဘို့ထူးခြားတဲ့ကြည့်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ဘူတာရုံသို့မဟုတ် program တစ်ခုဝိသေသလက္ခဏာထိန်းသိမ်းသောတိကျစွာတစ်ဦးချင်းစီကိုပစ်ခတ်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ပေး. စီရင်။
Vinten Radamec အကြောင်း
Vinten Radamec အသံလွှင့်စက်ရုပ်ဘီဘီစီများအတွက်ပထမဦးဆုံးစက်ရုပ်စနစ်အားတီထွင်ခြင်းနှင့်ယခုအင်ဂျင်နီယာထူးချွန်နှင့်နည်းပညာများနှင့်စျေးကွက်ကျယ်ပြန့်များအတွက်တကမ္ဘာလုံးထောက်ခံဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်ကင်မရာထောက်ခံမှုစနစ်များကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူအဖြစ်, ထုတ်ကုန်များ၏ Vinten Radamec ရဲ့ကျယ်ပြန့်စက်ရုပ်အကြီးအကဲများ, အောကျခံခုံနှင့်စတူဒီယို, OB နှင့်ဥပဒေပြုရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်သင့်လျော်သော controller စပါဝင်သည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးဆန်းသစ်ထုတ်လွှင့်စက်ရုပ်အချို့တို့အတွက်အသိအမှတ်ပြု, Vinten Radamec သတင်းစတူဒီယိုကွန်ရက် (ရိုက်ချက်များသာလက်တဆုပ်စာလိုအပ်တဲ့နေရာ) နှစ်ဦးစလုံးရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကင်မရာကစတူဒီယိုများအတွက်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်, ထပ်ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်အတူဘယ်မှာစက်ရုပ်အောကျခံခုံ, ဒယ်အိုးနဲ့ tilt လှုပ်ရှားမှုများကိုအသုံးပြုကြသည်။ အမှန်တကယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်ထောက်ခံမှုကွန်ယက်နှင့်ဖြန့်ဖြူးအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးဝေးရောက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များတစ်ဦးနှင့်အတူ, Vinten Radamec ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကမ္ဘာ့အသံလွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စက်ရုပ်အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 700 တပ်ဆင်ကျော်ရှိပါတယ်။
PRODUCT မှ: Tarsys
တစ်ခါတစ်ရံပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတင်းကြပ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်တိုအခါ, သင်တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ပါတယ် မာလ်တီမီဒီယာ ဒေတာဘေ့စပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးစုံကို formats နှင့်ဗားရှင်း supporting များနှင့်ဒေတာများ-တိပ်စက်ရုပ်စာကြည့်တိုက်နဲ့ Disk repositories ကပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ဦးဖြန့်ဝေ archive ကိုဗိသုကာဖြတ်ပြီးသိုလှောင်မှုနိုင်ပါတယ်။ Tarsys ကြောင်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ non-ကိုဗီဒီယိုအဖြစ်ကိုဗီဒီယိုဖိုင်များ, မူလတန်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖြစ်ထောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပုံရိပ်ဖိုင်များ, စာရွက်စာတမ်းများ, Spreadsheets, pdf ရဲ့, စတာတွေဟာ archive ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့်လိုအပ်သောအဖြစ်ပုံငယ်များနှင့်အမျှအများအပြား metadata ကိုလယ်ကွင်းနှင့်အတူဒေတာဘေ့စတှငျမှတျတမျးတငျထားသကြသည် - အရှင်ရိုးရာမီဒီယာနယ်ပယ်တွင်ကျော်လွန်ရောက်ရှိမယ့်ပေးခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်ပေး။ ၏တနျခိုးအသုံးချ Oracle က နည်းပညာ, Tarsys ဗားရှင်း4၏နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်ထောက်ခံပါသည် Oracle က ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော Oracle က ဒေတာဘေ့စ 11g R2, Oracle က Linux ကို 5.5 / 6, Oracle က ဒေတာဘေ့စကိရိယာနှင့်လည်း Oracle က Exadata Database ဟာစက်။ Tarsys ဒေတာဘေ့စအပြည့်အဝ CMIS စံနှင့်အတူလိုက်နာ မိုက်ကရိုဆော့ဖရှိပါတယ်သည့်ဂုဏ်သတင်းအိုအေစစ်စံချိန်စံညွှန်းများခန္ဓာကိုယ်မှ (အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါန်ဆောင်မှုများ, SAP, Oracle က နှင့်သူတို့၏အင်္ဂါတို့တွင် IBM က) အရာ metadata ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာ application ကိုမှလျှောက်လွှာထဲကနေအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ရောင်းချသူ-ကြားနေလမ်းအာမခံပါသည်။ ဤအမှုစနစ်ရဲ့မီဒီယာ Tarsys Difference ကိုစမ်းသပ်ပါထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုတယ်လီဖုန်း, အင်တာနက်, စျေးကွက် applications များ, အဖြစ် Non-ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုမှခရီးဆောင်နှင့်အလွယ်တကူလဲလှယ်ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်, အနာဂတျအတှကျအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
Tedial မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) တွင်အထူးပြုဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်, hierarchical သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှု (HSM), စီးပွားရေး Process ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု (BPM), transcoding နှင့်မီဒီယာဖြန့်ဖြူး။ Tedial ဖြေရှင်းချက်တင်းကျပ်သောက ISO 9001 & 27001 အရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် software ကိုနည်းပညာနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ တဆယ်နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, Tedial'' s ကိုသက်သေနည်းပညာထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်စဉ်များအကောင်းဆုံးနှင့်ကို automation အားဖြင့်ဖိုင်-based Workflows နှင့်ပြည့်ဝ၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြုပါတယ်။ Tedial'' s ကိုဖြေရှင်းချက်ရောင်းချသူနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲလွတ်လပ်သော, စီးပွားဖြစ်အသတ်ထဲကနေဖောက်သည်လွှတ်ပေးပြီးသိသိသာသာကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာသူတို့ကိုဖွင့်ကြသည်။ နှင့် Tedial နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ operating တစ်ခုထိရောက်, အပြည့်အဝ tapeless ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံရှိခြင်း၏မှာပါတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာမသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားသည်ထုတ်လွှင့်များ၏လက်လှမ်းမမီအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ Tedial ယင်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အများဆုံးရှုပ်ထွေးနှင့်အကြီးဆုံးမြို့ပေးခဲ့သည်စနစ်များအချို့အပါအဝင်ထက်ပို 50 နိုင်ငံများတွင် 12 က high-profile ကိုရည်ညွှန်းက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်ရှိပါတယ်။
PRODUCT မှ: Steadicam တစ်ကိုယ်တော်
အဆိုပါ Steadicam ကင်မရာတောင်ကိုပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်ကြယ်ပွင့် Sylvester Stallone running-up, အနုပညာများ၏ Philadelphia တွင်ပြတိုက်၏ခြေလှမ်းများရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ရှိရာ "Rocky" အတွက်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Steadicam ဖြစ်နိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ (သို့သော် 2006 အတွက်အခင်းဖြစ်ပွားရာဖျော်ဖြေရေးအတွက် 101 အများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်အချိန်လေးတစ်ဦးအဖြစ် E ကိုအားဖြင့်အမည်ရှိ၏ - လည်းကြည့်ရှု "Steadicam NAB 30 မှာယင်း၏ 2005th ရာပြည့်အခမ်းအနားဆင်နွှဲ" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Tiffen ။ 2005-04) ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းအရေးပါတဲ့မှတ်တမ်းတင်ကတည်းကကူးမြောက်ခြင်း, Steadicam အစဉ်အဆက်ကတည်းကနည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးမှု၏ရှေ့တန်းမှအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (အထက်) ကို Steadicam မိသားစုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်၏ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်ပါနဲ့မှာထုတ်ကုန်ကိုရှာ NAB ပြရန် Booth C8818 မှာ။ သငျသညျစိတျပကျြမရလိမ့်မည်!
Tiffen ဓာတ်ပုံပြပွဲ filter များ, မှန်ဘီလူး accessories များဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူခဲ့, စားသုံးသူ / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်နှင့် 75 နှစ်ပေါင်းအဆိုကိုရုပ်ပုံနှင့်ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, သာလွန် optical ကိုက်ညီမှုများနှင့်မတူနိုင်တဲ့အရည်အသွေးကြွယ်ဝသမိုင်းရှိပါတယ်။ Tiffen Motion Picture Arts & သိပ္ပံအကယ်ဒမီကနေနည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆုကိုဝင်ငွေ၎င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့်အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုအဖြစ်မျိုးစုံEmmy®ဆုပေးပွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကုမ္ပဏီပါဝင်သည်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်း: Tiffen® filter များ, စနစ်များ, Lowel®အလင်း, Listec® teleprompters, Tiffen Dfx®ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ဆော့ဖ်ဝဲ, Domke®အိတ်, Davis က & Sanford® tripod တည်ငြိမ်Steadicam®ကင်မရာ, ဇင် ®ကင်မရာအဖုံးများ, Stroboframe® flash ကိုကွင်းခတ်, Saunders®ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညှပ်နှင့် Kodak Wratten® filter များ။ Tiffen image ကို-အောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရန်လိုတိုးတက်မှုနှုန်းမှတဆင့်ဦးဆောင်ပုံရိပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်က၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်။
Tiffen အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.tiffen.com.
PRODUCT မှ: ပြံ့နှံ့ရုပ်ရှင်ရုံ 5K Visual Effects
သငျသညျပြံ့နှံ့ run မရကြလျှင်, သင်သည်တစုံတခုကို run ကြပြီမဟုတ်! 2k, 4k နှင့်စိတ်တွင်မရရှိနိုင် 5k ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှုတ်, ပြံ့နှံ့သည့်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူဂိမ်းပြောင်းလဲသွားပြီ 5K ရုပ်ရှင်ရုံစီးရီး. ထိုသို့ MY စကားလုံးယူမနေပါနဲ့ - အောက်တွင်ထုတ်စစ်ဆေး:
ထိုတစ်ဦးတည်းသာဒီကမ္ဘာမြေ-shattering ထုတ်ကုန်သရုပ်ပြရရှိနိုင်ဗီဒီယိုများပဲ! အဆိုပါပြံ့နှံ့ 5K ရုပ်ရှင်ရုံစီးရီးစကြဝဠာအတွင်းရှိအမြင့်ဆုံး resolution ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအသစ်စီးရီး 12 မြန်နှုန်းမြင့်ပါရှိသည်, high resolution ကတော့အယ်ဒီတာများနှင့်အနုပညာရှင်များအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု 5k ။ အောက်ပါ 12 volumes ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အခြား 40 + volumes ကိုအတူယခုရရှိနေပြီဖြစ်သည်! အလေးအနက်ထား - ငါရှည်သောကာလ၌တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ပရိုဂရမ်များထဲကတစ်ခု!
ပြံ့နှံ့နေတဲ့ကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပြံ့နှံ့ယနေ့အယ်ဒီတာများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နားလည်သူကိုအလုပ်လုပ်အနုပညာရှင်များသေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြံ့နှံ့မှာကဒီမှာဖန်တီးအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ပြံ့နှံ့နောက်ကွယ်မှအဓိကဒဿနကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ရရှိနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ် client ကိုဤအ element တွေမတတ်နိုင်လျှင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုသင်အနုပညာရှင် / အယ်ဒီတာလုပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်ပူဇော်သမျှကိုယနေ့ကဝယ်ချက်ချင်း download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည် - ယနေ့သင့် timeline ထဲမှာ drop ။ သင်အခုအများအပြားထုတ်လွှင့်ဘဏ်ဍာပေါ်မှာငါတို့အကြောင်းအရာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အင်တာဗျူးအဘို့အအတော်များများအထူးနှုန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့မှင်, မီးခိုးများနှင့်မီး element တွေကိုအသုံးပြုနေသည်နှင့်အချို့သောနာမည်ကြီးအခွက်တဆယ်ရှိုးသူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်ဗီဒီယိုဒြပ်စင်အဖြစ်ကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာကို အသုံးပြု. အဖြစ်စတိုင်ဒြပ်စင် (ရုပ်ရှင်ပွဲတော် FX, ရောင့်ဂီတ) နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ GunFX ဒြပ်စင်သည်လက်ရှိတွင်မျိုးစုံအဓိကရုပ်သံစီးရီးမှာအသုံးပြုတဲ့လျက်ရှိသည်။ ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအများအပြားလွတ်လပ်သောသီချင်းဗီဒီယိုများ၌အကြှနျုပျတို့၏ရုပ်ရှင်ဒြပ်စင်အချို့ကိုတကယ်အေးမြအသုံးပြုမှုကိုမြင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တချို့ကပါဝင်သည် အား NBC, CBS, VH1, Technicolor, MTV, ABC ရုပ်သံနှင့်ဒစ္စနေးအနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒြပ်စင်စသည်တို့ကို, ကြယ်, ပြစ်မှုဆိုင်ရာစိတ်ထဲနှင့်အတူ Dancing, အမေရိကားရဲ့ Got Talent: ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ကြပြီ
PRODUCT မှ: Creative Cloud
Adobe ကစာသားက၎င်း၏ယူတာဝန်ခံဗူး-ဦးဆောင်မှတဆင့်အသုံးပြုမှုကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖို့လမ်းကိုဦးဆောင်နေသည် ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက် - အ Creative Cloud ။ အဘယ်သူမျှမကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်? ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အားလုံးသင့်ရဲ့ Creative Cloud desktop ပေါ်မှာ application များကိုသင့်ကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ထားကြပါတယ်။ အဆိုပါ app များကို install လုပ်ထားကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်သည်ထိုသူတို့သုံးစွဲဖို့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ Upgrade နှင့်ပင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်ရှိခြင်းအခြားအသုံးပြုသူမရှိဘဲလျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူဖိုင်တွေ share! Creative Cloud အဖွဲ့ဝင် options များ အဖွဲ့ဝင်ဖြည့်စွက်ရန် Single-app ကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေအကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ တဖန်သင်တို့ကိုရှေးခယျြထားတဲ့ option ကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, သင်တို့သည်လည်း cloud storage နှင့်ခွဲဝေမှုစွမ်းရည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ မည်သူမဆိုအတူဘယ်နေရာကနေမဆို, ဘာမှဖန်တီးပါ။ သင်ကယုံကြည်ဖို့မြင်ရမှရရှိပါသည်!
အကြောင်းအရာ Adobe Systems ထည့်သွင်း
Adobe ကဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.adobe.com။ © 2013 Adobe Systems ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ Adobe က, အ Adobe ကလိုဂိုနဲ့ Creative Cloud မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဖြစ်စေများမှာ Adobe Systems အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်ထည့်သွင်း။ အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
PRODUCT မှ: RadiantGrid
TrueGridâ "¢နှင့် Transwrapping နိုင်စွမ်း, RadiantGrid နှင့်အတူဝါကြွားခြင်း Intelligent Transcoding Multi-Platform ကိုဖြန့်ဝေဘို့အကြောင်းအရာစားသုံးမိ, ပြင်ဆင်မှု, အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်ကြောင်း built-in ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူဖိုင်တစ်ဖိုင်-based software ကိုဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ RadiantGrid ပုံမှန်အားဖြင့်အထူးကြပ်မတ်ဖိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဆုံးမခြင်းဖြစ်စဉ်များကြာနှင့်အပြည့်အဝသူတို့ကိုအလိုအလျောက်။ ဒါဟာအသိဥာဏ်သင့်မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသောသတင်းအချက်အလက်တို့ကိုစုဝေးစေနှင့်အရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာများ၏မျှော်မှန်း format နဲ့, ဘောင်, လယ်ပြင်, အသံများနှင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးဒေတာ parameters များကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, ထိုလုပ်ငန်းအသွားအလာထဲသို့သက်ဆိုင်ပါသည်။ အပြောင်းအလဲနဲ့¢TrueGridâ "သင်မျိုးစုံစက်တွေကိုဖြတ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြုနေတုန်းတစ်ပြိုင်နက်အများအပြားတာဝန်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် accelerates ။ အဆိုပါရလဒ်, ရိုးရှင်းတဲ့ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာပိုပြီးထိရောက်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အတိတ် 20 နှစ်ပေါင်းအဘို့, Wohler Technologies က ယင်းအသံလွှင့်, ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Audio / အမြင်အာရုံစျေးကွက်များအတွက် In-ထိန်သိမ်းအသံနှင့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်ပေးမယ့်ကမ္ဘာကခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ San Francisco အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ Will Wohler အားဖြင့် 1983 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် 1987 ထဲမှာ, amp-1 ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတဦးတည်းထိန်သိမ်းယူနစ်အတွက်အပြည့်အဝစတီရီယိုအသံက featuring တစ်ဦးစွမ်းအင်သုံးစပီကာ system ကိုပူဇော်ဖို့ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခံခဲ့ရပါတယ် Wohler Technologies က (အသံတိုင်း) နှင့် PANORAMAdtv (ဒစ်ဂျစ်တယ်ဌာနခွဲ), ​​AES / EBU, Analog စများအတွက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကိုပေး, ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်ပါပြီ HDဆန်းသစ်တီထွင်မှုရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်တွေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင် / SD က-SDI, Dolby®ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Dolby အီး, Wohler Technologies က , SD က-SDI များအတွက်စောင့်ကြည့်မှုဖြေရှင်းနည်းများမိတ်ဆက်ပေးဖို့ပထမဦးဆုံးခဲ့ HD-SDI နှင့် Dolby အချက်ပြမှုများ။ အခြေခံ Analog စကနေရှုပ်ထွေး Multi-ရုပ်သံလိုင်း encoded ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းရပ်ကွက်။ Wohler ထုတ်ကုန်အများဆုံးအာကာသ-အရေးပါ application များအတွက်စောင့်ကြည့်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။
PRODUCT မှ: ForScene
FORscene ခဏတစ်ဝှမ်းခဲ့များနှင့်အများဆုံးကဆုရသည်ကိုသိမှတ်ထားပါတယ် ဘက်ပေါင်းစုံ cloud-based ကိုဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, အဆောက်အဦအိမ်ခြေ, အင်တာနက်မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်, ဗီဒီယိုစာကြည့်တိုက်များ, content တွေကိုပံ့ပိုးပေး, စတူဒီယိုနှင့်ထုတ်လွှင့်များ၏ Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာမှသွက်လက်နှင့်ထိရောက်မှုကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်။ သို့သော်လူတိုင်းမပြီးသားရရှိနိုင်ပါသည်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့် cloud-based Post-ထုတ်လုပ်မှုစနစ်သောဤဈေးကွက်-ဦးဆောင်ပလက်ဖောင်း, များအတွက် feature အသစ်များနှင့်ပေါင်းစည်းမှုအကြောင်းကိုသိတယ်။ FORscene'' s ကို bandwidth ကိုရရှိနိုင်မှုနှင့်စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်လိုက်လျောညီထွေဖို့ "âအလုပ်လုပ်€စဉ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအကြားလဲလှယ်" သစ်ကိုက high-resolution ကို proxy ကိုအသုံးပြုသူများကသူတို့€âချင် resolution ကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တားမြစ်ထားသည့်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများမှာလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ FORscene ပြင်ဆင်ရန် interface နဲ့ Workflows အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပုံပြင်ကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်သော toolsets ။ တားမြစ်ထားသည်၎င်း၏စားသုံးမိဆာဗာများပေါ်တွင်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်နောက်ခံ operating system ကို updated နှင့်မိုဃ်းတိမ်နှင့်စားသုံးမိ server ကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ transcode-related လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို updated သိရသည်။ အားလုံးအသစ်က features တွေအဖြစ်တားမြစ်ထားရဲ့အသစ်လိုဂိုနှင့်တံဆိပ်, အ 2014 မှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် တဲ SL5305 ၌တည်၏။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက FORscene မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.forscene.co.uk.
တားမြစ်ထား Technologies က plc ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် cloud အခြေခံဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ကယ်လွှတ်တတ်ထားတဲ့ဆုရနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူ့ရဲ့ flagship ထုတ်ကုန်, FORsceneကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့် cloud-based ကိုဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2004 အတွက် IBC မှာဖြန့်ချိ, FORscene , log တည်းဖြတ်, ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာထက်ပိုမို3သန်းနာရီထုတ်ဝေရန်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Atos, information model ရဲ့, deltatre အပါအဝင် High-profile ကိုမီဒီယာနှင့်နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းအခြားရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်အပေါ်ကိုးကား, Forbidden မိတ်ဖက် EVSနှင့် Key ကို Code ကိုမီဒီယာ။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက FORscene မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.forscene.co.uk။ တားမြစ်ထား Technologies ကအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.forbidden.co.uk.
အဆိုပါ "လျာထားစာရင်း" စာရင်း (အောက်တွင်) ဟုခေါ်ဆိုရန်ခက်ခဲခဲ့ကြောင်းအနိုင်ရမှဒါနီးစပ်လာသည်ဟုအထက်ပါ-ပျမ်းမျှအားထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်!
ထုတ်လုပ်သူ ကုန်ပစ္စည်း အမည်စာရင်းတင်သွင်း
K-Tek Stingray အသံအိတ် မူလက
iOgrapher LLC အိုင်ပက် / iPhone အတွက် iOgrapher မိုဘိုင်းမီဒီယာဖြစ်ရပ်မှန် မူလက
သဟဇာတ Multiscreen ကြော်ငြာ INSERT ဖြေရှင်းချက် မူလက
Litepanels Hilio D12 / T12 သစ်လွင်မှု
တပ်ဦးဆင်ဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ် အနှစ်ချုပ် - Metadata စီမံခန့်ခွဲမှု သစ်လွင်မှု
Anton / Bauer ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘက်ထရီ
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် StreamScope Portal ကို သစ်လွင်မှု
လမ်းဆုံလမ်းခွစနစ်များ Strongbox LTFS NAS မော်ကွန်းတိုက် သစ်လွင်မှု
PAG, Ltd. PAGlink 3-လုံး Intelligent ချိတ်ဆက်ခြင်းဘက်ထရီ သစ်လွင်မှု
Telestream post ကိုထုတ်လုပ်သူ တီထွင်ဖန်တီးမှု
Maxon CINEMA4DR15 တီထွင်ဖန်တီးမှု
Litepanels Sola9တီထွင်ဖန်တီးမှု
Sachtler ACE အားဆက်စပ်ပစ္စည်း ရှေးခယျြခွငျး
ဖိုတွန်မုတ်ဆိတ် ပလက်တီနမ် Blonde ရှေးခယျြခွငျး
Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ Dalet က Galaxy ရှေးခယျြခွငျး
Freefly စနစ်များ MA ?? VI ကို M5 Handheld ကင်မရာတည်ငြိမ်ရေး ရှေးခယျြခွငျး
သဟဇာတ ProMedia Multiscreen အဘိတ်ဖြေရှင်းချက် ရှေးခယျြခွငျး
NewTek TriCaster 40 ရှေးခယျြခွငျး
GoPro GoPro HERO3 + က Black Edition ကို ရှေးခယျြခွငျး
Myers ProTrack ရှေးခယျြခွငျး
2014 အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ 2014 NAB ပြရန် 2015 NAB ပြရန် BB ဆုပေးပွဲ အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် NAB Show ကို Beat ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အကြောင်းအရာ Las Vegas မှ NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2014 NAB NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Pamela Kleibrink Thompson က post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2014-04-03
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ် Vision ၏ NAB4မှာရွှေမျက်လုံး 2014 Scanner လွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: NAB 4, Sl2014 / ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ Suite, Renaissance ဟိုတယ်ရပ်: ဒစ်ဂျစ်တယ် Vision ၏ NAB 2014 မှာရွှေမျက်လုံး 6026 Scanner လွှတ်တင်